Yambiro yekukurumidzira neUNWTO Anoremekedzwa Secretary-General Francesco Frangialli
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Yambiro yekukurumidzira neUNWTO Anoremekedzwa Secretary-General Francesco Frangialli
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Wtn
Tsamba Yechitatu Yakavhurika kuNhengo dzeUNWTO neMunyori Mukuru-General Francesco Frangialli
5 mazuva apfuura
9 min kuverenga
rakanyorwa Dmytro Makarov
Vose vaimbova Munyori Mukuru weUNWTO Francesco Frangialli uye Dr. Taleb Rifai vakanga vakakwana.
Tsamba yazvino yechinyoreso neyaimbove Secretary-General inotaura nezvekubiridzira, Kutongwa kwaStalinist uye poindi apo kunyangwe kururamisira kunova kusaruramisira.
Francesco Frangialli, uyo Munyori Mukuru weUNWTO uye aimbova mukuru wesangano akapindura Tsamba yaZurab Pololikashvili kune ese Nhengo dzeNyika kubva vhiki rapera.
Francesco Frangialli akashanda seMunyori Mukuru weUnited Nations World Tourism Organisation kubva 1997 kusvika 2009 uye anoverengerwa semumwe wevanhu vanoremekedzwa zvakanyanya muindasitiri yepasirese yekufamba nekushanya.
Zvakanyanya kuitwa naFrangialli semunyori mukuru zvaisanganisira “kugadzirwa kwenzira inogamuchirwa nepasi rose yekuyera kukanganisa kushanya kweupfumi hwenyika uye kutambirwa kweGlobal Code of Ethics for Tourism kukurudzira kushanya kwakanaka uye kwakasimba.
Uku kutyorwa kwebumbiro retsika uku ndiko kunokonzeresa kuti aimbove mukuru weUNWTO ataure zvine chisimba mutsamba dzakavhurika achipokana nemutungamiri aripo wesangano.
VaFrancesco Frangialli vanoudza Zurab Pololikashvili mumhinduro yake yakazaruka yetsamba:
Vanodiwa Vamiriri veNhengo dzeNyika dzeWorld Tourism Organisation,
Tsamba Yekutanga Yakavhurika: WTN yeKubata muUNWTO Sarudzo
Tsamba Yechipiri Yakavhurika kuUNWTO Nhengo dzeNyika pamushumo weEthics Officer pane manejimendi tsika nemaitiro muSangano
Ndiri kukunyorerai munzvimbo yangu seaimbova Munyori Mukuru weWorld Tourism Organisation. Kune avo vasingazive nezve prehistorical times, ndaive Deputy Secretary-General kubva 1990 kusvika 1996, Secretary-General. ad interim muna 1996-1997, uye Secretary-General kubva 1998 kusvika 2009. Munguva ya2001-2003, ndakatungamira kushandurwa kweInstitute yedu kuita sangano rakasarudzika reUnited Nations.
Sezvo ndave kutungamira Secretariat zvinomanikidza, semaonero angu, kuzvidzora, kunyanya panguva iyo Sangano riri muhurongwa hwesarudzo hwekudoma Secretary-General waro kwemakore mana anotevera. Ndokusaka, zvisinei nekuti ini ndinogovana mazhinji emafungiro akataurwa murugwaro urwu, ini handina kusaina tsamba yakavhurika yakatumirwa neboka revakuru vepamusoro-soro.
Asi tsamba ichangoburwa yakatenderedzwa kuNhengo naSecretary-General varipo uye kupomerana kwairimo kunondimanikidza kuti ndisangane pachena papfungwa mbiri.
Chekutanga, kana chakanangana nenguva yandakanga ndichitungamira, handikwanise kugamuchira chirevo chekuti "zvisizvo zvakaitwa uye mazhinji akakosha Nhengo dzeNyika dzakabuda, mamiriro ayo Sangano anga achiedza kugadzirisa kubva panguva iyoyo".
Paanenge achitaura "zvisizvo", munhu haagoni kugara asina kujeka. Kukanganisa kwese kunofanirwa kuzivikanwa. Izvo zvinofanirwa kutaurwa pazvakaitika, ndiani akazvikonzera, uye kuti ndeipi nyika yakasiya semhedzisiro.
Ndizvo chaizvo zvinonzi Stalinist kutongwa
Pandakanga ndiri Secretary-General, hapana nyika yakakosha yakasiya Sangano.
Pandakabatana neWTO seMutevedzeri weMunyori Mukuru wechidiki kuna Antonio Enriquez Savignac, Sangano rakanga risina kunyatsogadzikana. Nyika zhinji dziri muCentral America, dzakadai seCosta Rica neHonduras, uye muAsia-Pacific, dzakadai sePhilippines, Thailand, Malaysia, uye Australia, dzakanga dzaenda; United States yaifanira kutevera nokukurumidza. Nevakanditangira, uye, gare gare, mukuraira ini, takabudirira kudzoreredza maitiro iwayo.
Pandakabva kuUNWTO muna 2009, Sangano raive nenhengo zana nemakumi mashanu. Nyika dzose dzeAsia dzakanga dzamboenda dzakanga dzabatanazve, uye itsva murutivi urwu rwenyika, urwo runokosha nokuda kwebhizimisi rokushanyirwa, dzakanga dzauya. Nyika dzakakosha dzakaita seSaudi Arabia, Croatia, Serbia, Ukraine, Kazakhstan, neSouth-Africa, nedzimwe dzakawanda, dzakanga dzapinda. Latvia, Lithuania, United Kingdom, Norway, Australia, neCanada dzaive Nhengo.
Ndakanga ndagamuchira tsamba kubva kuhurumende yeNew Zealand ichitaura vavariro yayo yokukumbanira. Secretary of Commerce of the United States anga akurudzira kutama kumwe chete kuMutungamiri wake. Ndichiverenga tsamba yoMunyori Mukuru, ndinofara kuziva kuti vatungamiriri varipo vari kushanda kuti “vagadzirise” kusavapo kwedzimwe nyika huru. Ndinocherechedza kuti yave ichitungamirira kwemakore mana uye kuti hapana chigumisiro.
Nekuda kwezvipo zvinobva kunyika idzi "dzakapfuma", asiwo nekuchenjerera kugadzirisa manejimendi, uye kudzikisira kwemitengo yevashandi, iyo yarasika kuona, UNWTO yakanakidzwa panguva yandakaenda, mari yakawandisa, ichibvumira. kupa mari chirongwa chakapfuma uye chakasiyana chezviitiko zvenguva iri kuuya yebhajeti 2010-2011. Kana a"kushomeka kwemari kwakanyanya” yanga iripo kana kuti iripo nhasi, haina kubva panguva ino.
Chechipiri, handibvumirane nefungidziro yekuti, sezvo yakatenderwa neKanzuru, maitirwo ekudomwa kwemumiriri pachigaro cheSecretary-General akasarudzwa uye akashandiswa nenzira kwayo, yakajeka, uye yegutsaruzhinji. Yakanga isiri yerudzi urwu.
Pamwe chete nemutsivi wangu seMunyori Mukuru, Dr. Taleb Rifai, uye tisingapindiri munzira ipi neipi musarudzo yaizoitwa, takayambira nekufamba kwenguva nezvenjodzi inosanganisirwa nehurongwa hwenguva yakarongwa nemumiriri weSecretary-General uye yakagamuchirwa. Executive Council pamusangano wayo wechi112 muTbilisi. Dai manzwi edu ainzwika, kusava nechokwadi uko zvino kunokanganisa kutendeseka kwehurongwa hwese hwesarudzo kungadai kusipo.
Musangano munyika yekumusha kweavo varipo panguva iyo nhengo zhinji dzeKanzuru dzakatadza kufamba nekuda kwedenda uye vazhinji vacho pavakamiririrwa nemamiriri avo kuGeorgia, vakaburitsa rusaruro.
Kanzuru yakabvumira hurongwa hwekuita kuti vasakwanise kuzvizivisa, kuwana rutsigiro kubva kuhurumende dzavo, kutsanangura nekuparadzira chirongwa chavo, uye kuita mushandirapamwe sezvakangoita. Iyi nguva isina kurongeka zvachose, pamwe chete nemamiriro ezvinhu ehutsanana uye nguva yekupera kwegore, zvakatadzisa vaigona kukwikwidza kushanya kunyika dzinovhota. Kuita sarudzo kuMadrid kwaifarirawo Secretary-General ari kubuda, seaimbova mumiriri kuSpain. Zvese izvi zvakaiswa pamwechete zvakapa kune aivepo mukana wekukwikwidza usiri wakarurama pamusoro pevanogona kukwikwidza.
Chirevo chenguva pfupi inoseka yenguva pakati pezvikamu zviviri zveKanzuru yaive yekuve nechikamu che113 muMadrid pamwe neiyo yakakosha yekushanya muSpain, iyo FITUR. Izvi zvaingovanza chokwadi kuNhengo, sezvo zvaive pachena kubva pakutanga kuti, nekuda kwedenda, FITUR yaisazoitika sezvakarongwa muna Ndira. Sezvakaoneswa mutsamba yandakanyorerana naTaleb Rifai, iyo yakaoma hutsanana nharaunda yaifanira kunge yakatungamira kune yakapesana mhinduro: kubata musangano weKanzuru nekunonoka sezvinobvira, muchirimo semazuva ese, kana kunyangwe pakutanga kweGeneral Assembly.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, kufambira mberi kwezuva kwaingova kubiridzira.
Secretary-General ari kubuda ari kukakavara mutsamba yake kuti nzira yakatevedzwa yaive pamutemo, uye yanga ichidonha “mukati mekuda kwe Executive Council pachayo".
Izvi ndizvo chaizvo. Asi kuva pamutemo hakuna kukwana. Mukugadzirisa maitiro, unogona kuva zvose zviri pamutemo uye unzenza.
Maitirwo esarudzo anogona kuitwa zviri pamutemo maererano neMitemo, asi panguva imwe chete asina kunaka uye asina kuenzana. Pakupera kwezuva, kwete tsika.
Sophocles akanyora kuti:
"Pane imwe nhambo iyo kunyange ruramisiro inova isina kururama".
Ndinovimba kuti General Assembly, mukugona kwayo "nhengo yepamusoro” yeUNWTO, ichaita zvinodikanwa kuti ive nechokwadi chesarudzo dzakachena muMadrid uye kudzokera kune manejimendi akanaka eSangano.
Ndinokushuvirai mose kugara kune zvibereko uye kunofadza muSpain.
Munyori Mukuru weUNWTO
Australia inovhurazve miganhu mushure memwedzi gumi nemasere yeCOVID...
WTTC: Kufamba kwebhizinesi kuchasvika zvikamu zviviri muzvitatu zve ...
NASA New Updates paKutangwa uye Docking yeSpaceX Crew ...
Israel Inovhurazve kune Vafambi Vepasirese
Ramangwana reUNWTO Rakaumbwa neSaudi Arabia neSpain: Nyowani ...
International Contemporary Art Fair muKyoto
Pedyo neMiriyoni imwe marobhoti Iye zvino muChina Mafekitori
Lufthansa Group ndege dzinowedzera 440 itsva US, Spain...
Nyowani India Secretary we Ministry of Civil Aviation ...
WHO Director-General vanotaura G20 Hutano neMari...
Ita Mari Kuona Vhidhiyo NeApp iyi
Grenada Underwater Sculpture Park inopedza kugadziridza
New CDC Nhungamiro yevaAmerica paOmicron Covid ...
Gurukota rezvekushanya kweJamaica Inotumira Tsitsi kuMhuri ye ...
Costa Rica Gurukota rezvekushanya kwakakura Danho reNew...
New Blossom Hotel Houston Inovhura Magonhi ayo
Tsamba Yechipiri Yakavhurika neVakuru veUNWTO Vakuru Kukurudzira ...
India Inovavarira Kumisikidza mazana maviri Endege Atsva panosvika 200
Frankfurt Airport Inotangisa Itsva Yechando Chirongwa:...
Kisimusi Parade inova chiitiko chekufa kwevanhu vakawanda mu ...
Turkey's New Tourism Inotarisa paMichato